Munaasabada xuska qowmiyadaha Itoobiya oo ka bilaabanaysa maanta magaalada Jig-jiga ee DDSI – Radio Daljir
Diseembar 8, 2013 1:59 b 0
Jig-jiga, December 8, 2013 – Magaalada Jig-jiga ee xaruunta dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya waxaa maanta ka furmaya xuska maalinta qowmiyadaha ee dalkaas oo sanadkan ay marti-gelinayso magaalada Jig-jiga.
Waxaa la soo bandhigayaa hidaha iyo dhaqanka, dhaqamada iyo taariikhada qowmiyadaha kala duwan ee dalka Itoobiya.
Xuska qowmiyadaha waa mid sanadle ah oo hadba lagu qabto mid ka mid ah dowlad deeganada kala duwan ee dalkaas, waxaa sanadkan casumaysa dowladd deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Magaalada Jig-jiga waxaa ku sugan wufuud kala duwan oo ka socda dalalka deriska la ah Itoobiya, waxaa ka mid ah madaxda jooga, hugaamiyaha Jubba Axmed Madoobe, madaxweynaha Puntland Faroole, madax ka socda Soomaaliland.
Gelinkii dambe ee shalay sidoo kale waxaa Jig-jiga jooga wefdi ka socda dowladda federaalka ah oo uu horkacayo Cabdulaahi Ciil-mooge Xirsi.
Baahin: Sabti, 7 Dec, 2013, Caawa Iyo Daljir Weriye Cabdirisaaq C Cabdi Silver ~ Daljir ~ Galkacyo